> Resource > Video > Sida loo dar Audio in AVI
Iyada oo qalab waxaan ku dari kartaa audio weel avi ah? Sababtoo ah VDMod, Nandub iyo Avi-Mux waa waxtar lahayn ee hawshan ...
Mararka qaarkood waxaa laga yaabaa in aad rabto in aad ku darto audio in AVI laakiin ka heli barnaamijyo badan ma taageeraan. Sidaas halkan waxaan ku talinaynaa qalab video tafatirka xoog badan - Filmora Wondershare (asal ahaan Wondershare Video Editor) . Sidaa daraadeed, aad si fudud ku dari kartaa audio in AVI ama qaabab video kale sida MP3, qaab WMA, OGG, ama FLAC oo u badbaadin doonaa sida file cusub. Hadda download Filmora Wondershare (asal ahaan Wondershare Video Editor) oo ay bartaan sida loo geeyo audio iyo video isticmaalayo tallaabooyinkan fudud ee hoose.
1 dar files ee barnaamijka
Ku rakib iyo abuurtaan Wondershare Filmora (asal ahaan Wondershare Video Editor). Markaas dajiyaan labada file AVI iyo track audio barnaamijkan. Si tan loo sameeyo, riix "Import" button ama si toos ah jiidi oo iyaga hoos u Item Warbaahinta. Dooranaysaa, kuwaas oo files ku daray oo iyaga hoos u ah kuwan raadkaygay dhiganta guddiga jadwalka hoos ku qoran. File video waa in lagu rakibaa on track video ah oo file maqal ah wadada audio.
2 beeg file maqal ah
Haddii video iyo dhererka soundtrack ma u dhigma, waxaa laga yaabaa in aad u baahan tahay in ay wax ka bedel audio ah. Tusaale ahaan, haddii file maqal ah waa ka sii dheer aad video badan, guuraan slider in ay dhamaadka audio ah, oo jiidin haboon dhererka video ah. Haddii video waa ka sii dheer tahay track music ah, aad nuqul karo iyo file maqal ah ku paste iyo meel faylasha kooxda guuriyeen dhinac wadada isku mid.
Haddii aad rabto in aad sii xaalkaa file asalka audio, double waxa guji iyo beddelo goobaha ee xawaaraha, mugga, garoonka, libdhi gudaha / dibedda sida aad jeceshahay.
Fiiro gaar ah: haddii aad hore u file AVI ku jira track maqal ah, in aad marka hore waa in meesha laga saaro. Si tan loo sameeyo, xaq guji file AVI iyo dooran "Audio fuji" ay u kala soocaan audio asalka ka video. Markaas riix "Delete" button on keyboard ah inaad ka saartid.
Ka dib markii ay ku daray audio iyo video daro ah, aad u dhoofin karaan sida file cusub. Guji "Abuur" oo xulo "Qaabka" tab. In uu furmo suuqa wax soo saarka, xulo qaab loo baahan yahay. Waxaad kaloo booqan kartaa "Device" tab iyo dhoofinta la horena u diyaar-dhigay u qalab mobile. Dabcan, aad si toos ah ayaa sidoo kale waxa ay gali kartaa in YouTube wadaaga dunida ama gubi in DVD u ciyaaro on TV guriga.
Daawo video tutorial si aad u barato sida loo dar files audio in video: